Dhakhtarkii Caaqilka ahaa!!! - Daryeel Magazine
Dhakhtarkii Caaqilka ahaa!!!
Dhakhtarkii ayaa yiri: “Dawo ayaan u hayaa taa. Goortii ay u muuqato in ninkaagu caroonayo, soo qaado koob biyo ah afka ka buuxso ka dibna ku hay afka sidi qof ku luq-luqanaya, ha tufin hana liqin ilaa uu ka tago ama seexdo.”
Dhakhtarkii ayaa ugu jawaabay: “Biyaha waxba ma sameyn. Inaad afkaaga xirato ayaa farsamada iyo xeelada keentay!!
Talooyin Iyo Xikmado Laga Dhaxlay Saynisyahankii Albert Einstein Adeegyo Caan Ku Ahaa Barnaamijyada Windows 7 Iyo 8 Oo Uu Windows 10 Ka Tegey Hal Koob Oo Biyo Ah Waxay Kaa Badbaadinayaa 10 Dhibaato Caafimaadeed Qado Laga Samaynayo Bariis iyo Digaag